प्रेमीलाइ टिप्परले किचेर मा रे लगत्तै सुर्खेतमा प्रेमिकाले सँगै जिउने सँगै मर्ने कसम खाएकाे भन्दै गरिन् आत्मह त्या! – PathivaraOnline
Home > समाचार > प्रेमीलाइ टिप्परले किचेर मा रे लगत्तै सुर्खेतमा प्रेमिकाले सँगै जिउने सँगै मर्ने कसम खाएकाे भन्दै गरिन् आत्मह त्या!
प्रेमीलाइ टिप्परले किचेर मा रे लगत्तै सुर्खेतमा प्रेमिकाले सँगै जिउने सँगै मर्ने कसम खाएकाे भन्दै गरिन् आत्मह त्या!
admin January 29, 2020 समाचार	0
माघ १५, विरेन्द्रनगर । बिरे आज सुर्खेतमा टिपरले कि चेर महावौ गाउँपालिका – ३ सिम्खेत निवासी केशर बहादुर सिंहको निधन भयो । निधन लगत्तै उनकि प्रेमिकाले आ तमाह त्या गरिन । दोषीलाइ हदैसम्मको कानुनि कारबाहि होस । यो जोडिको प्रेमले बाकि ६ वटै जुनि सम्म अँगालोमा बाँधिने सौभाग्य पाओस । समाजले चोखो माया र प्रेमको उदाहरण दिदा यो जोडिको नाम लिओस । शोक सन्तप्त परिवारलाई धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलाेस ।
वीरेन्द्रनगर- वीरेन्द्रनगरमा टिपरले कि च्दा मंगलबार बिहान एकजनाको घटनास्थलमै मृ त्यु भएको छ। वीरेन्द्रनगरस्थित रत्न राजमार्ग खण्डमा बाङेसिमलदेखि मंगलगढी आउँदै गरेको टिपरले कि च्दा कालीकोट महावै गाउँपालिका–३, सिमखेत घर भएका २० वर्षीय केशर सिंहको मृ त्यु भएको हो।
वीरेन्द्रनगर–३ गौतम चोकमा भे१ख २२४२ नम्बरको टिपरले भे१प २१७८ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठ क्कर दिएको थियो। टिपरले सिंहलाई किचेर अन्दाजी २० मिटरसम्म घिसारेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। सिंहका आफन्तले अहिले यरिचोक र गौतम चोकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्रहरीले टिपर चालक र टिप्परलाई नि यन्त्रणमा लिएर अ नुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको केही क्षेत्रमा कर्फ्यु लगाएको छ । ट्रिपरको ठ क्करबाट एकजनाको निधन भएपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण कर्फ्यु लगाइएको हो । टिपरको ठक्करवाट घ टना स्थलमा एक जनाको निधन भएपछि उ त्ते जित भि डलाई नियन्त्रणमा लिन प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले कर्फ्युको लगाएको हो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नं ३ स्थित गौतमचोक नजिकै निधनपछि उत्तेजित भिडले तो ड फो ड, आ ग ज नी गर्न उत्रिदा स्थिति नि य न्त्र णमा लिन प्रशासनले कफर्युको आदेश जारी गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर खड्काले जानकारी दिए । आज बिहान ट्रिपरको ठ क्करबाट कालिकोट जिल्ला महावै गाउँपालिका ३ बस्ने वर्ष २१ का केशरबहादुर सिंहको निधन भएको थियो ।